Okukugqwesileyo Kokuhle Koku: I-Nas Albums i-albhamu
Umculo Rap & Hip Hop
I-Top 10 Nas Albums
I-albhamu enkulu kakhulu ye-Esco ibonakala ingcono kunokuba umculi wakho othanda kakhulu
I-Nas ibe yinto ephawulekayo kwi-hip-hop amashumi eminyaka. Ukususela kwiminyaka engama-90 ubudala, uNasty Nas udale izinto ezaneleyo ukuze amenze abe ngumbono oqinileyo wesithsaba se-hip-hop. U-Nasir Jones ungumntu omncinci we-MCs odibanisa ngokugqithiseleyo uluhlu oluphezulu lwabantu abalishumi. Enyanisweni, ukuba akayiyo phezulu 10 uluhlu lwakho ke uluhlu lwakho lukhona. Inombolo ye-1 kwimi, ukuba uyazibuza. Ufuna u bungqina? Nantsi ingqungquthela yama-albhamu amahle kakhulu ase-Nas, athatyathwa ukusuka kumbi kakhulu.
Nas - U-Hip-Hop Ufile kwaye ikopi ye-Def Jam.
Kwi-cover, i-Nas ikhupha umnyama omnyama, ngelixa lizingela phantsi kwelitye lokufuzisela ngamagama athi "I-Hip-Hop Is Dead" ibhalwe kuyo. Le nto yayingumxholo omkhulu kakhulu wokusebenza kwakhe. Enye into ephawulekayo yinto yokuqala yokubambisana phakathi kwabaxhasi beNass noJay-Z, "iRiphabliki yaseMnyama."
Ulibale isicatshulwa se-albhamu esingenakuzikhethela kwisibini. Umfundi wezitalato unemizuzu emfutshane ye-classics yaseNas ("iNazareth Savage," "Lawa aMaHlathi ethu"), ezinye iingubo ezilumkileyo, kunye namaqela ambalwa. Umba omkhulu kunomfundi wezitalato kukuba yi-albhamu kabini. Ama-albhamu aphindwe kabini, ngokuya kwi-hip-hop iya. Iimpawu ezincinane kakhulu ze-MCs zinezinto eziphathekayo zekhwalithi ukusabalalisa kwiidiski ezimbini. Oko kwathiwa, ezinye zeNas 'ziqhayisa ixesha ("Ukuzibulala," "I-Virgo," "Ngomzuzu nje") inokufumaneka kule albhamu.
Izihlobo ezide. © UMG
Ngaphandle kwethemplate ekumele ilandeleke (akukho mvakalisi owake wabambisana nomculi we-reggae kwiprojekti epheleleyo), uNas noDamian Marley badibanisa ngamandla abo olwabelwana babo kunye nemvelaphi yomculo. Bobabini abaculi bebhenkcela kwiintsapho zomculo, uyise kaNass u-Olu Dara ungumculi we-jazz kunye noyise kaMarley ... ngokuqinisekileyo, akafunanga isingeniso.
I Nigger Tape
I-Nas iqela kunye ne-DJ Green Lantern kule ngqungquthela ehlawulwe ngezopolitiko kwi-albhamu engenanto . Ngethuba i-Nas isebenzisa ukulungiswa kwe-PR ekunyanzeliswe kwi-albhamu efanelekileyo, akayi kugcina nto kule mixtape. Le yiNayile eluhlaza, ayifuni kwaye ayifuni.
Yabhalwa ibona i-Nas ezama ukulinganisa i-grit kunye nozuko lwe- Illmatic . Enye yeengoma ezivelele ukusuka ku-Nas '2 yokungena kwakuyi "Umyalezo," owenziwe ngu-2Pac njengesihlaselo somntu siqu ngenxa yemigca ethi "Iingqungquthela ze-Fake, akukho thando, ufumana i-slug" kunye "Ngaphandle kwesitalato wawusendle, uthetha' ukuba ubalekele njani isiqithi kwi-Isiqithi ngamashumi asibhozo anesithoba. " Kwakhona kubonisa ukuba "Ukuba Ndiyidumise Ihlabathi," intsebenziswano yeklasi kunye ne-21 ubudala yaseLauryn Hill.
Njengoko isihloko sichaza, i- Stillmatic is Nas 'umzamo wokuphinda i-classic feat ye- Illmatic . Wafika ngokukhawuleza, kodwa masithi nje oku akusiyo i- Illmatic . I-Stillmatic yafika ekuphakameni kobuhlanga obunzima be-Nas kunye no-Jay-Z, ngoko ke imigca embalwa yazinikezelwa kulo mbandela. Ngubani na ondibambayo? "Ether" yazinikele ngokupheleleyo kuloo sihloko. Ezinye iingoma ezivelele ezivela kwi- Stillmatic ziquka "u-2 Ubuntwaneni" kunye "noMic Mic."
I-Nas - Iipopu ezilahlekileyo. © Columbia
Kuthetha ukuba ezinye zeNas 'zisebenze kakuhle , Iifayile ezilahlekileyo kunye neTi - tap Tap phakathi kwazo, aziyizona albhamu ngokwemveli yendabuko. Ukususela ekubeni ubeke umgangatho kunye ne-Illmatic, iNas ayizange ibe nempumelelo enkulu kwinkqubo yokwenza i-albhamu. Kodwa xa enendawo yokuvumela imirhumo yakhe isebenze, ikhululekile kwifom ye-albhamu, i-Nas iyabukhanyisa ngokwenene. Oku kuhlanganiswa kwamabotleki avela kuma-albhamu adlulileyo kubonisa uMC we-MC owona mzamo ongcono kakhulu kunabantu abaninzi kakhulu. Iimpawu ezinjenge-"Ukudakwa Ngam"
UNyana kaThixo ufumanisa uNazi kwizinto zakhe ezingakumbi. U-Nas usanda kuvela kwimfazwe enobuhlungu kunye noJay Z, wanyamezela isityhilelo sokuthi u-ex wakhe wayenomdla kunye nomdla, kwaye ngakumbi kunabo bonke, walahlekelwa ngumama wakhe. Umxube we-Nas owamnceda wamvumela ukuba achukumise iingcamango zakhe ezinzulu kwi-albhamu ephawulekayo yomsebenzi wakhe. Izihlandlo zokuma ziquka: "Phuma," "Ukwenze Ukhangele," "Ingoma yesiGrike," kunye ne "Book of Rhymes."
Nas - Ubomi buhle. © Island Def Jam
Ukususela ngo-Illmatic uNass wakwazi ukudibanisa ulawulo lwekhwalithi. Ubomi buhle, buphefumlelwe yimiqathango yokuqhawula umtshato, uN Nas ubuya kwiingcambu zakhe zeengqungquthela, ngelixa ehlanjwe ngabanye abavelisi bezona zinto zihamba phambili.
Nas - I-Illmatic. © Columbia
I-Nas 'ka-1994 yokuqala yabonisa imbongi encinane nelambileyo ephefumlelweyo. Ngomdawa wakhe, uQueensbridge, njengexesha elizeleyo, uNasty Nas unikela ngeendaba ezicacileyo malunga neentloko ezixakile, ukunyuka amabhinqa kunye namabanjwa. Iingxenye ezilinganayo ziphelile kwaye zinethemba; ama-dark alleys kunye neelanga. "Ubomi b B" ityhilo yobutsha: "Ndivukile kusasa ngomhla wam ozelwe ngalo, ndiyiminyaka engamashumi amabini endibusisayo '/ Ubuncinane bokubakho buhamba emzimbeni wam ngoku ndiwutsha / kubhiyozelwa ngenxa yokuba ndiyenzile. " Sekunjalo, uxhomekeke kumzabalazo ozayo, njengoko ehlala eveza imifanekiso emibi ebomini kwiimpahla ze-Queensbridge eziphosakeleyo. Ekugqibeleni, uNam wadala ingqungquthela enkulu yeebongozi eziqhubekayo. Umgangatho wegolide we-albhamu ye-hip-hop.
I-Biography ye-Rapper Nas
Iingoma ezi-11 zeRe Rap Album ezifunyenwe
Ibali likaJoe Cole: I-Biography
Phezulu 'Ii-80 zeengoma zeAlarm
Isingeniso ekuvakaliseni iAlfabhethi yesiFrentshi
I-Table Tennis Basic Strokes - I-Forehand Topspin Serve
I-Golf yakho Shot Hits IiNtloko zeMithombo yamandla: Yintoni yoLawulo?
I-11 ehamba phambili yokuhamba ngeebhayisikili ukuthenga ngo-2018
Yintoni i-Chemical Element?
Iinqununu eziPhezulu eziLungelo lezilwanyana
I-Bre-X Gold Scandal
Fumana "I-Swimmer yaseCuba," i-Play nguMilcha Sanchez-Scott
Yintoni iCubism yokuHlanganiswa?
Indlela yokuthatha iikholeji zaseKholeji kwiikholeji
I-Northeastern GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Admissions yaseYunivesithi yaseSaint Augustine
Indlela yokufumana uMoya opheleleyo we-Skydiving